Kutheni kuthengwa iKhaya elitsha ngeZongezo eziLuhlaza okanye iiNqaku zeMandla eziLuncedo
EyoKwindla 11, 2020 by IHarry Kesare, Iimbono zizonke:
Xa usiva igama elithi "ikhaya eliluhlaza," ngaba likhumbula indlu enemibala eluhlaza? Okanye, mhlawumbi, indlu ngaphandle ehlathini enezinto ezininzi eziluhlaza eyadini? Kwabanye bayayenza, kodwa ayisiyiyo loo nto ithethwayo. Ikhaya eliluhlaza yindlu enobuhlobo eco. Yindlu eyakhelwe ukonga amandla kunye namanzi, kunye nokuphinda isebenzise nantoni na enokuphinda isebenze.
Kutheni kufuneka uthenge okanye wakhe ikhaya eliluhlaza
Amakhaya endalo asezantsi. Oorhulumente abaninzi bamkela imigaqo-nkqubo ekhuthaza ukugcina indalo nokubabandakanya kwimithetho yabo ekwakhiweni kwezindlu.
Abakhi bamakhaya bazi ngakumbi ngokutshintsha kwemozulu. Ke amakhaya aluhlaza ngakumbi nangakumbi eza neendlela zakudala zokwakhiwa kwendlu kushiywa ngasemva.
-Yilungile kwi-wallet yakho
Ngaphandle kokukhathalela indalo esingqongileyo, ukwakha okanye ukuthenga indlu eluhlaza kwenza ingqiqo yezemali kuba inexabiso elikhulu kunelo lezindlu eziqhelekileyo.
Izindlu zendalo ziqhuba izixhobo zombane kwaye zakhiwa ukonga umbane ngandlela zonke ezinokuthi ziguqulele kulondolozo lwabanini bamakhaya kwixesha elide.
Ukwakha ikhaya eliluhlaza kukwabandakanya ukusetyenziswa kwezinto ezihlaziyiweyo ezihlala zihlala zixabisa kancinci, kwaye ngaloo ndlela, imali eninzi igcinwa. Umzekelo, ungasebenzisa izinto ezihlaziyiweyo ukuphinda ubiyele umzi okanye wakhe ifanitshala ehlala ixesha elide. Amakhaya aluhlaza agcina indalo ngokusika inkunkuma.
-Izibonelelo ziyafumaneka kwigadi yakho
Amakhaya e-eco afaka umhlaba ococekileyo kwindawo yawo yoyilo. Ukulondolozwa komhlaba okuluhlaza kulapho watyala khona izityalo kwigadi yakho eyakukunceda ugcine imali, amandla kunye nexesha. Ezi zityalo kufuneka zinciphise inkunkuma kunye nongcoliseko ekhaya lakho.
Indlela elungileyo yokubandakanya ukubekwa komhlaba okuluhlaza ekhayeni lakho kukukhulisa izityalo eziyinzalelwane yakho kwindawo yakho. Izityalo zemveli thatha amanzi amancinci, amandla kunye nexesha ukuze ulondoloze kwaye uya kuchuma, ukongeza kubuhle bekhaya lakho. Ubuqili kukuphepha izityalo ezihlaselayo ezingafunekiyo eziyakutshutshisa ezinye izityalo zitshabalalise utyani bendawo.
Unokusebenzisa izityalo ukugquma ikhaya lakho kwaye unciphise iindleko zokupholisa indlu. Tyala nje imithi emide ecaleni kwekhaya elifumana elona ilanga. Kwiindawo ezingafumani manzi maninzi, ukutyala izityalo ezichasene nembalela yenye indlela enkulu yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi.
Guqula ikhaya lakho libe likhaya eliluhlaza
Kubantu esele benekhaya, akufuneki uthengise okanye uhambise ukuya eluhlaza, unokuyilungisa indlu yakho kwaye uyiguqule ibe likhaya lokonga amandla. Yinkqubo ehamba kancinci eya kuphucula ikhaya lakho, yongeze ixabiso layo, kunye nokuvumela ukuba wenze inxaxheba yakho ukugcina indalo.
Iindlela onokuyenza ukuba indlu yakho ibe nobuhlobo ngokwendalo
- Jika kwizinto zombane ezisebenza ngokufanelekileyo
Izixhobo ezininzi ezindala, ezinjengezompahla zokuhlamba iimpahla, ii-washers kunye neefriji, zisebenzisa amandla amaninzi kwaye azinabungozi kokusingqongileyo. Ke, qala ngokutshintsha endaweni yazo zonke izixhobo ezindala endlwini yakho ngezixhobo zangoku ezizinto inkanyezi yamandla eqinisekisiwe.
Kukho ezinye izibonelelo kwezi. Umzekelo, ezinye iindawo okanye iindawo ekuhlaleni zinika izaphulelo zokuphinda ziphinde zisebenze kunye nokuthenga izixhobo zombane ezisebenza ngokufanelekileyo.
Ukuhamba okulula njengokutshintsha i-bulbs ze-incandescent zakho nge-bulbs ezonga amandla e-Microsoft akukuthathi kakhulu.
Ungasindisa amandla ngokufaka ikhaya lakho. Oko kuya kuqinisekisa ukuba akukho bushushu bawulahlekileyo ukusuka endlwini kunciphisa iindleko zokufudumeza. Ingcaphephe yokwakha izindlu inokukunceda ekuphembeleleni umzi wakho ngokusebenzisa ukufafaza igwebu okanye ukufaka iifestile ezisebenza ngamandla.
-Shift kwizixhobo ezifanelekileyo zekhaya
Unokuthenga izixhobo zombane ezinciphisa ukusetyenziswa kwamanzi. Umzekelo, abanye oomatshini bokuhlamba benziwa ukuba basebenzise amanzi amancinci.
Ukufakelwa kwesityalo sokurisayikilisha amanzi kwimibhobho yakho kuqinisekisa ukuba akukho manzi amdaka avela ekhaya kwaye nawaphi na amanzi asetyenzisiweyo asetyenziswayo ukunkcenkceshela isitiya sakho
- Sebenzisa umthombo wamandla endalo
Ikwalixesha lokusuka kumandla e-fossil kwi-eneji eluhlaza. Oko kuthetha ukutshintshela kwimithombo yamafutha engonakalisi umhlaba xa uveliswa kwaye kungakhuphi izinto ezinobungozi kwindalo. Apha, zininzi izinto onokukhetha kuzo kodwa enye ivelayo ngamandla elanga.
Ilanga lisoloko likho, kwaye ngumthombo omkhulu wamandla asimahla. Iiphaneli zelanga zinokukunceda ukufudumeza amanzi kunye nekhaya lakho kunye nokubonelela ngokhetho olongezelelweyo ngombane. Ukuba uvelisa umbane ongaphezulu kwiipaneli zakho zelanga, ungawuthengisa nakwiinkampani zamandla kwezinye iindawo.
Xa konke kusenziwa kwaye kusenziwa, umba wokutshintsha kwemozulu awunakuphinda ungakhathalelwa. Ukutyala imali kwikhaya eliluhlaza ngoku kuyakusindisa kwinkcitho engaphezulu kwaleyo uyenzayo kwixesha elizayo. Ukuba sele unendlu, licebo elihle ukuqala ngokuguqukela kwizisombululo eziluhlaza kunye nezinto zombane. Ubuncinci, iya kongeza ixabiso kwikhaya lakho, kwaye konke okusemandleni, uya kuba wenza inxaxheba yakho ukugcina indalo.
IHarry Kesare Matshi 11, 2020
Olu ngeno yafakwa kwi Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Ikhaya elitsha. Bookmark le Permalink.
Februwari 27, 2018 Iingcebiso ezi-7 zokupeyinta Oku okusingqongileyo kungenxa yethu. Iya kukhula okanye yonakalise kuxhomekeke kwindlela esiyiphatha ngayo. Kule minyaka idlulileyo umsebenzi omninzi wenziwe ukugcina i-ozone, yiya eluhlaza kwaye yintoni kungenjalo. Njengenxalenye yesiqubulo esithi "Yiya eluhlaza" ipeyinti ibe ngcono nayo. Kunyanzelekile ukuba silandele iingcebiso ezimbalwa ezincinci ukunceda ukufaka igalelo kwisizathu. Eli nqaku liza kukubonelela ngeengcebiso ezi-7 zokuphila ngocwangco ekufuneka ulandele. Kulumkele ukuxhaphaka: Kucetyiswa ukufumana uqikelelo kwindlela […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
January 9, 2017 Izinto ezi-5 oza kuzenza emva kokufudukela kwiNdlu eNtsha Ukufudukela kwindawo entsha ngumbandela onzima. Akunjalo ngenxa yokuba zininzi izinto ekufuneka uzenzile, kodwa nangenxa yokuba imeko ngokwayo idla ngokuba nzima kwinqanaba lemvakalelo. Cinga ngayo, usuka kwindawo ebikade iphaya kwikhaya lakho kwaye uhlala ushiya bonke abahlobo bakho kunye nabamelwane. Kulula ukubona ukuba kule meko abantu bathambekele njani ekubeni bazilibale izinto. Ukuze ungavumeli le nto yenzeke kuwe, Nazi izinto ezintlanu ekufuneka uzenze […] exhonyiweyo Ukuqhubeka
Julayi 28, 2018 Izinto ezi-3 ezibalulekileyo ekufuneka Uzikhumbule ngelixa usakha ikhaya lakho elitsha Ungaze wamkele ukwakha indlu engafezekisiyo imigangatho yakho. Uvunyelwe ukuba ungqongqo kwindawo, kodwa hayi kuyilo. Awufuni kwakha indlu ukuyidiliza kuphela emva kwexesha elincinci. Njengoko undwendwela iisayithi ze-Intanethi kwaye wenze uphando lwakho, qinisekisa ukuba uzinza kwisakhelo esiya kuhlala ixesha elide. Konke oku kunokufezekiswa ukuba unoyilo olungileyo. Ikhaya alizukuphelela kuphela xa yonke into ibekwe endaweni; ukusuka kwiminyango, ukuya […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Julayi 20, 2018 Iingcamango zokhuni malunga nendlu entsha entsha eyakhiwe Ukuba unekhaya elisandul 'ukwakhiwa elinobunewunewu, ngokungathandabuzekiyo unandipha izinto ezininzi ezintsha zesakhiwo sale mihla. Nangona kunjalo, kuhlala kukho imvakalelo yokuba kukho into ekufuneka yongezwe ukuyenza ukuba ibonakale ngakumbi. Kulapho unyamezelo oluncinci kunye nesarha ejikelezayo inokwenza umahluko omkhulu. Ukuthatha isigqibo malunga noyilo Into yokuqala emelwe kukuthathwa ngumntu isigqibo loluphi udibaniso olufunekayo ukunika ikhaya lakho ukubamba okungaphezulu okuya kulungela isitayile sakho kunye […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Septemba 20, 2016 Yiya eluhlaza! Iingcebiso zokuhlaziywa kweKhaya le-Eco-Friendly Ukulungisa kwakhona ipropathi kunokuba lixesha, imali kunye nokuchitha amandla. Ukuba xa ugqibile malunga naloo nto, awunazo ezinye iziphumo eziya kukubuyekezela ezintathu, ngaphandle kobuhle, kufana nokuthi ubachithe. Ukulungiswa ngokutsha kweGreen ayisiyofani eqhubekayo kulo nyaka kwaye inyamalala ngokulandelayo. Utyalomali kwikamva, lubangela ukuba amatyala asezantsi kunye nokuhanjiswa kweenyawo zekhabhoni ephantsi, ngenxa yoko akukho sizathu sokuba ungaluhlaza ikhaya lakho namhlanje. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga […] exhonyiweyo Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Ngamana 3, 2016 Yintoni ebangela ukuba kube yinto efanelekileyo ukutyala imali 'eluhlaza' kwipropathi? NguRakhi Kaptiyal Abakhi bezezindlu kunye nabaphuhlisi, kwihlabathi liphela, baqalile ukubona izibonelelo zokuya kuluhlaza kwaye iindaba ezimnandi zezokuba bayakhuthaza kwaye babhengeza iiprojekthi zezindlu eziluhlaza. Iiprojekthi zokuhlala kwiindawo ezixekweni ziya zisiba nkulu kwaye zingcono, njengoko iinkampani zokwakha zamazwe amaninzi ziyaxhonywa ukuze ziyile indawo yokuhlala encomekayo nazo zonke izinto eziyimfuneko. Abaphuhlisi bezindlu nomhlaba bazama konke okusemandleni abo ukwakha amakhaya ahlala-ethe-ethe kwaye […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Ngamana 3, 2016 Ungayithenga njani iLog yeKhaya Ithunyelwe ngu: UJan Burmistroff Ikhaya elingena kwilog yindawo yokuhlala yomhlali wasemaphandleni osentshona. Unokufuna ukuba neli khaya le fama yakho okanye impahla yokuzihlaziya ngenxa yoko ihlangana kakuhle nendlela yokuphila yasemaphandleni. Ikhaya lokuloba yindawo eyahlukileyo yokuhlala. Ayinako ukuqina ukuba ikhaya eliqhelekileyo linakho ukuhlawula. Ikhaya lokuloba ngokuyintloko lenziwe ngamaplanga okuthetha ukuba iphantsi kokubola kunye nokudumba. Iyakwazi nokuhamba ixesha. Ezi zinto zenza ukuba kuthengwe izindlu endlwini […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Disemba 14, 2018 Izibonelelo zokusebenzisa amandla aluhlaza kwiKhaya lakho Amandla eluhlaza athandwa ngakumbi kwaye afikeleleke rhoqo ngonyaka kodwa ukufakela inkqubo yamandla ahlaziyiweyo kwikhaya lakho kusesisigqibo esikhulu. Unokungaqiniseki ukuba ukutshintshela kumandla ahlaziyekayo kuyaxabisa iindleko kunye nomzamo. Nangona kunjalo, zininzi izibonelelo zokuxhobisa ikhaya lakho ngamandla acocekileyo. Nazi iindlela ezintlanu onokuthi uzixhamle ngokusebenzisa amandla aluhlaza okanye ahlaziyekayo endlwini yakho: Hlisa impembelelo yakho kwindalo esingqongileyo Abantu banefuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo, […] exhonyiweyo Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Ngamana 3, 2016 Njani ukuba i-Eco-Fabulous ibe ngu-Eco-Nomical Ithunyelwe ngu: Ralph Bredahl Ukuba nobuntu obucocekileyo yeyona ndlela intsha ethandwayo kodwa lo gama wonke umntu enezizathu zakhe "zokuluhlaza" umxholo ophantsi koluluhlaza ungangumhlobo wewallet yakho. Yonke into ukusuka kulondolozo lwamanzi kunye nezinye izinto ezinokubaluleka kokuzikhethela okusingqongileyo zinokubeka imali eninzi epokothweni kwaye abo babuyayo ekhaya bajonga ezi ndlela xa bethenga indlu. Yimalini onokuyigcina? Amakhaya anikwe amandla njenge […] exhonyiweyo Imali yezezindlu, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza